ICONY Lehman College: I-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO
I-CUNY Lehman College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
ICONY Lehman College ye-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukungena. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ingxoxo yee-Lehman College's Admissions Standards:
IYunivesithi yesiXeko saseNew York yaseLehman College, enye yeekholeji eziphezulu ezi- 11 kwi-network ye-CUNY , inomlinganiselo owamkelekileyo wokumkela, kodwa oku kunomlinganiselo wesiphakamiso somfaki-sicelo omkhulu kunesibalo esiphezulu sokwamkelwa. Kule minyaka yangoku. malunga nekota ukuya kweyesithathu kubo bonke abafake izicelo baye bafumana iileta zokuwamkela. Ukungena, abafakizicelo kufuneka babe neemvavanyo zokulinganisa eziqhelekileyo kunye neeGPA eziphakamileyo zezikolo eziphakathi okanye ezingcono. Kwigrafu ngasentla, amachaphaza ahlaza okwesibhakabhaka noluhlaza amela abafundi abavunyelweyo. Uyabona ukuba uninzi lwabahlanganisile ama-SAT amanqaku (RW + M) angama-950 okanye ngaphezulu, umlinganiselo we-ACT umlinganiselo we-18 okanye ngaphezulu, kunye nesilinganiso esiphakathi kwesikolo esiphakamileyo se "B-" okanye esingcono.
Uyakuqaphela kwakhona ukuba kukho ininzi ebomvu (abafundi abanqatshiwe) baxutywe kunye nohlaza oluhlaza kunye nolusuhlaza okwesibhakabhaka ngasezantsi nakwesobunxele begrafu. Kwinqanaba eliphantsi namanqanaba amabakala, abafundi abaninzi banqatshelwe amabakala kunye namazinga okuvavanya afana nabafundi abamkelekileyo. Oku kubonisa ukuba amanqaku amanqaku aphantsi akuyikho isiqinisekiso sokungeniswa, kwaye umviwa unelungelo elihle lokungena kunye nomlinganiselo we-SAT odibeneyo we-1050 okanye ngaphezulu, kunye ne-GPA ye-3.0 (iqinile "B") okanye ngaphezulu .
Kwiiphelo ezingaphantsi kweemigangatho, izigqibo zokungeniswa ziya kugqitywa zibe zizinto ezingezizo zamabanga kunye neziphumo zokuvavanya. Amagosa avunyelwe ukuphonononga izicelo ngokubanzi , kwaye izigqibo zisekelwe ngaphezu kwedatha yenombolo. Isicelo se-CUNY (esetyenziswe ngabo bonke i-campus CUNY) sicela isicatshulwa yesicelo kunye neencwadana zengcebiso . Ukuba ezi ziqinileyo kwaye zityhila ukuba umenzi wesicelo ubonisa isithembiso sempumelelo yekholejini, anokunceda ama-offset grades kunye neziphumo zokuhlola ezilinganiselweyo ezingaphantsi kwezinto ezifanelekileyo. Ukuba uphezu oluphantsi kwebala lokwamukelwa, kuya kuba bubulumko ukubeka ingcamango eninzi kunye nokunyamekela ukubhala iincwadana zakho, kwaye qiniseka ukhetha i-recommender owazi kakuhle kwaye unokuthetha ngamandla akho. Ekugqibeleni, iLehman College, njengazo zonke iikholeji ezikhethiweyo, ziya kujonga kwiinkqubo zezikolo zakho eziphakamileyo , kungekhona nje kumabakala akho. Ukuba uzalise ngempumelelo Ekugqibeleni, unokuqinisa ngakumbi isicelo sakho ngokwenza intetho yodliwano-ndlebe .
Ukuze ufunde okungakumbi ngeLekman College, ii-GPA zezikolo eziphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye nama-ACT, amanqaku angancedisa:
IProfayili ye-Admissions yeKholeji yaseLehman
Amanqaku afana neLehman College:
I-SAT Score Ukuthelekiswa kweekholeji ze-CUNY
I-Sacramento State State GPA, SAT kunye ne-ACT Data
I-Princeton Yunivesithi ye-GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data
IDyunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
AmaPodcasts yamaKristu Uya Kufuna Ukuva
Iimfundiso malunga neCrosasaurus
Kukho iindlela ezininzi zokufumana incwadi yamahhala kaMormoni!